Ogaden News Agency (ONA) – Ruwaayadi weyneed ee London Ka dhacday- Warbixin kooban
Ruwaayadi weyneed ee London Ka dhacday- Warbixin kooban
Posted by ONA Admin	/ November 3, 2013
Habeenimadi Jimchaha Magaalada London waxaa hadheeyay mawduuca Ruwaayada Ogadenya ee lagu qabtay Mashraxaweyn ee Hammersmith Town hall. Waxaa illaa hada laga hadlaya Qisadii Ruwaayada iyo sheekadii muggaweyneed ee Ururka dhalinyarada Ogadeniya ee wadanka UK soo bandhiggeen. Ruwaayadan oo isugu jirtay madadaalo aad u qosol badan, Qiiro naxdin iyo murugo xanbaarsan oo dadweynaha ka ilmaysiisay, Jaceyl, Heeso halgameed, dhaantoyin ayaa aad usoo jiitay shacabkii.
Ruwaayada caawa lasoo bandhigay waxay kaga duwaneed ruwaayadihi hore ee aan daawanay ee Ururada Dhalinyarada Ogadeniya soo bandhigi jireen Qisada ruwaayada. Qisada Ruwaayada hal shaqsi ayay ku socotay taariikh nololeedkiisi iyo waxa uu soomaray oo bilow illaa dhamaad isku xidhan midaas ruwaayadihii hore maanaan uga baranin ayuu yiri nin kamid ahaa dadkii daawaday.
Runtii Caawa aad ayaan u ilmeeyay, waligay kuma fikirin inaan sidaas u ilmeeyo, ruwaayad aad u cajiib ah oo dhiiga nadhaqaajisay ayay aheyd, aniga shaqsi ahaan dareen adag ayay igu abuurtay ayay tiri gabadh ii sheegtay inay Magaalada Leicseter uga timid inay ruwaayada daawato. Waxaan aad uga helay Cabdirisaaq gufeys, Bezani, labadaas inkasto qeybta xun ay sameynayeen hadana xumaantay sameynayeen majaajulo naga qoslisa ayay ku qariyeen.
Ruwaayadan oo uu Qisadeeda uu sameeyay Xildhibaan Axmed Yaasiin (Hoggaanka Arrimaha Bulshada..) ayaa lagu soo dhaweeyay innuu ka hadlo qisada ruwaadan dhalinyarta Ogadeniya ay u badaleen mashrax ruwaayadeedka. Axmed yaasiin ayaa aad ugu amaanay dhalinyarada OYSU UK sida wanaagsan ee ay Ruwaayadan u diyaariyeen, sheekadii uu alifayna ay ugu badasheen Mashrax ruwaayadeedka.
Abwaaniinta waaweyn ee Mashraxan kasoo qeyb galay waxaa kamid ahaa Ismaaciil Jaajumow, oo sheegay in Qisada ruwaayada iyo sida loo jilay ay cajiib aheyd. Waxaa ruwaayada ku jiray xikmad badan oo aan la koobi karin, waxaan ku dhiiri galinyaa in dhalinyaradu sii wadaan howshan.
Ruwaayadan waxaa ka qeyb galay Fanaaaniin aad u tiro badan oo qeyb ka ahaa Ruwaayada, waxaa kamid ahaa fanaaniinta mashraxa joogtay ee heesaha cajiiibka ah qaaday Cabdi Salaan Wajaale, Cabdifataax Jaaz, Cabdifataax Yare, Yusuf Dheere, Maxamed Yuusuf Yare, nasir Cunjuf, iyo Cabdi salaan Jiimi oo isagu sameeyay dhamaanba Musikada heesaha iyo ruwaayada.
Jilaayasha Ruwaayada ayaa waxaa hoggaaminayay Abwaan Jaango, oo mashraxa ka qaaday dhaantooyinkiisi aadka loo jeclaa.
Heesaha ruwaayadan kujira oo qeybo kamid ah dhalinyarada jilayaasha ahi ay qaadeen, ayaa ahaa kuwo xanbaarsan fariimo oo lasocda ruwaayada kuwaas oo intooda badan cusubyihiin hal iyo laba kasokow.
Shacab aad u triobadan ayaa ruwayadan kasoo qeybgalay Waxaaana inbadan oo kamid ahi ay codsadeen in magaaloyinka kale ee UK lagu celiyo ama cajalada ruwaayada horey loosoo saaro si ay guryahooda ugu daawadaan.
Gudoomiyaha Ururka dhalinyarada UK Mustafe Diirane ayaa sidoo kale u mahad naqay dhamaanba dadweynihii sharafta lahaa ee kasoo qeybgalay munaasabdan, Waxaa kale oo uu u mahad naqay xubno si gooni ah uu u magac dhabay midaas oo la’antood hirgasheen.
Ururka Dalinyarada UK ayaa si gooni ah ugu mahad naqay xubno uga yimid wadamada Scandenevianka si ay barnaamijkan qeyb uga noqdaan.